20 magaalo qurux badan oo ku taal Galicia I | Wararka Safarka
20 magaalo soo jiidasho leh oo ku taal Galicia I
Susana Garcia | | General, Maxaa la arkaa, safarka
Galicia waxay ka mid tahay dhulalka jacaylka ku dhacay, inaad ku dhalatay iyo haddii kaleba. Meel aan ka mid ahayn kuwa ugu xayeysiinta badan, laakiin si kastaba ha noqotee, iyada oo ikhtiyaar u ah, waxay ku guuleysatay inay boos ka hesho meelaha ugu wanaagsan Spain ee waxyaabo badan. Dadkeeda, xeebteeda, dabeecadaha dabiiciga ah iyo dabcan gaastoriskeeda. Waxaa laga yaabaa inaad fasax gashay oo aad ku dhex wareegtay magaalooyinka waaweyn adigoon ogeyn inaad seegtay wax aad u weyn: magaalooyinkeeda soojiidashada leh.
Maanta waxaan ku siin doonnaa xulashada koowaad ee 20 magaalo qurux badan oo ku taal Galicia, waanan gaabin doonnaa. Dhammaantood waxay leeyihiin wax gaar ah, wax loo maro oo xoogaa la joogo si loo ogaado waxa iyaga ka dhigaya kuwa gaar ah. Markaa waxaad horay u sameyn kartaa liistada magaalooyinka ay tahay inaad booqato marka aad halkaas ku laabato.
Waxaan ka bilaabaynaa mid ka mid ah magaalooyinka in kastoo ay yaryihiin ay ku soo qulqulayaan dalxiisayaal badan. Tani waa Combarro, oo ku taal Rías Baixas, oo ah aag aad loogu riyaaqo xeebaheeda iyo caloosha. Combarro waxaan ka heli doonnaa tuulo kalluumeysi oo caadi ah oo leh sawirro noocan oo kale ah oo aan maalin ku qaadan doonno sawirro. Ku doonyo midabbo yar yar leh, guryaha dhagxaanta, jidadka cidhiidhiga ah iyo makhaayadaha u adeega cuntada badda ayaa ah kuwo soo jireen ah. Laakiin intaas waxaa u sii dheer, waa inaad u aragtaa magaaladan maqaayadaha quruxda badan ee iska indha tiraya meertada iyo iskutallaabyada dhagaxa ah.
Ribadavia waa mid ka mid ah magaalooyinkaas wali ku sii haysa wax badan oo quruxdeeda hore ah. Mid ka mid ah booqashooyinka lagama maarmaanka ah waa Qasriga Sarmiento. Haddii aad timaaddo xagaaga waxaad ku raaxeysan kartaa Festa da Istoria, oo leh magaalo u labbisan sidii qarniyadii dhexe, iyo haddii kale, markaa waxaad had iyo jeer ku raaxeysan kartaa khamriga iyo bahalka octopus tapa.
Allariz waa mid ka mid ah villa-yadaas taxaddar ka muujiyay inaysan lumin dhammaan soo jiidashada aaggeedii hore, sidaas darteed si aad ah ayaa loo dhowray. Haddii aan rabno inaan aragno a magaalo gabowday leh soo jiidasho, waa inaan tagno magaaladan yar ee Ourense. Raadi Kaniisadda Santiago de Allariz, oo ah mid ka mid ah qodobbada ugu xiisaha badan, oo dabcan isku day inaad si deggan u lumiso naftaada adoo maraya jidadkeeda isku xira, kuwaas oo la sheegay in lagu sameeyay hadhaagii qalcaddii hore ee aan hadda jirin.
Rías Baixas waxaa ku yaal geeso badan oo xiiso leh, oo aan micne lahayn waa mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan. Waxaan ka helnay magaalada Cambados, oo caan ku ah sida ay caanka ku noqotay khamriga Albariño. Marka lagu daro joojinta dhadhaminta khamrigan caanka ah mid ka mid ah khamrigooda, waa inaan aragnaa waxyaabo sida haraaga Santa Mariña de Dozo, bartamaha magaalada, dhagaxa quruxda badan Pazo de Fefiñáns iyo Torre de San Sadurniño.
Waxaa la sheegay in qofkii aan u tagin San Andrés de Teixido qof dhintay uu nool yahay, sidaa darteed waa inaan halkaan ka gudubno goor dhow ama goor dambe, waana hubaal in safarku u qalmo. Guri aad u yar laakiin leh aragtiyo qurux badan oo ku saabsan buuraha. Booqashada meekheeda waa lama huraan, oo waliba ku raaxee aragtida badda marka aad timaaddo meeshan xiisaha leh ee xajka. Sababtoo ah haddii kale, xusuusnow inaad waa inaad ruuxi ku baxdo markaad dunidan ka tegayso.
O Cebreiro waa tuulo ku taal Lugo waxayna caan ku tahay soo kabashada pallozas caadi ah, dhismooyinkii awoowayaasha qaarkood oo ku dhacayey in la isticmaalo. Shaki la'aan waa hab dib loogu noqdo waqtiga si loo ogaado sida dadku ugu noolaa waqti aan fogayn aaggan buurta Lugo. Waa in aynaan joojinin u dhowaanshaha Serra do Caurel iyo canyons Sil ka dib markii aan ku raaxeysanay taariikhda bahallada la yaabka leh ee O Cebreiro.
Oritgueira waa magaalo xeebeed ku caan baxday xagaaga ee muusikada celtic. Meel u dhow waxaan ka heli karnaa xeebo waaweyn iyo sidoo kale bangiga caanka ah ee leh aragtida ugu quruxda badan adduunka, ee ku yaal buuraha Loiba. Booqashada magaaladan oo leh deked iyo hareeraha dabiiciga ah ee dabiiciga ah waa mid ka mid ah jidadka ugu quruxda badan ee aan sameyn karno.
Monforte de Lemos wuxuu uga sarreeyaa dhammaanba inuu ahaa meel muhiim ah waqtiyadii dhexe, oo ah magaalo qalcad ah oo dhismayaal badan lagu ilaaliyo. Filadhan waxaad ku raaxeysan kartaa qalcaddiisa caanka ah ee Torre del Homenaje, meesha ugu muhiimsan, meesha Tirinta Qasriga ama Kaniisadda Benedictine. Waxaad ku booqan kartaa dhibco taariikhi ah magaaladan quruxda badan ee Lugo, sida Buundada Old, oo la sheego inay asal ahaan ka soo jeedo Roman. Dabcan soo jiidashadeeda waa wax aan muran lahayn.
Waxaan ku dhameysanay darajadan koowaad magaalada Baiona, qeybta koonfureed ee Galicia. Waa magaalo xasilloon oo ku taal xeebta badda, oo eegaysa jasiiradaha caanka ah ee Cíes. Xaqiiqdii, magaaladan waxaad ka raaci kartaa doon si aad u booqato. Laakiin marka hore waa inaan ku raaxaysanaa xeebaha quruxda badan iyo Qalcadda Monterreal. Waxaan sidoo kale ka heli doonnaa mid kamida caravel de la Pinta dekedda Baiona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » 20 magaalo soo jiidasho leh oo ku taal Galicia I
7 Kastamka Caadiga ah ee Dalxiisayaasha
London oo ah lamaane